Hydraulic Excavator Kobelco SK 75 SR-3 အား ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ မောင်းနှင် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှု သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ ~ Myaylatt Daily.
Hydraulic Excavator Kobelco SK 75 SR-3 အား ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ မောင်းနှင် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှု သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ
6:09 PM သတင်း No comments
မကွေး ဇွန် ၃၀
မကွေးမြို့ စက်မှုတိုင်း(၃)ဆည်မြောင်းရုံး အစည်းအ၀းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာ ကိုင်ဒို ကုမ္ပဏီမှ Hydraulic Excavator KobelcoSK 75 SR-3 အား ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ မောင်းနှင် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှု သင်တန်းဆင်းပွဲကို ယမန်နေ့ညနေ ၄ နာရီက ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
သင်တန်းကို ဇွန်လ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့ထိ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဆည်မြောင်းမှ ၁၀ ဦး၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၁၀ ဦး၊စည်ပင်မှ ၅ ဦးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးမှ ၃ ဦး စုစုပေါင်း Operator ၂၈ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းတွင် စက်မောင်းနှင်မှု ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် simulator ဖြင့် လက်တွေ့ မောင်းနှင်မှု၊ kobelco hydraulic excavator SK 75 SR-3 ဖြင့် လက်တွေ့သင်ကြားပြသကာ ကျွမ်းကျင်စွာမောင်း
နှင်နိုင်မှု ပြိုင်ပွဲကျင်းပပေးပြီး အကောင်းဆုံး Operator ၃ ဦးကို ရွေးချယ်၍ ဆုများချီူမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းသားများအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ပေးအပ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
မြေလတ်ဂျာနယ် အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁၀)၊ ၂၀၁၇၊ သြဂုတ်လ(၁...
ပွင့်ဖြူမြို့တွင် H1N1 ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်အသိပညာပေ...
မြို့သစ်တွင်လူကုန်ကူးမှုတိုက် ဖျက်ရေးအသိ ပညာပေးဟော...
နှစ်(၇၀)ပြည့် အာဇာနည်နေ့အကြို ဟောပြောပြိုင်ပွဲနှင်...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာ ရှိသေးရင် ချီးကျူးခံရမဲ့ စစ်...
နှစ်(၇၀)ပြည့်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အကြို နယ်လှည့်...
စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထကောင်းများရရှိရေး နယ်လှည့် စာဖတ်ဝု...
မကွေးမြို့တွင် လမ်းချဲ့ထွင်ခြင်းကြောင့် လမ်းဧရိယာအ...
မြေလတ်ဂျာနယ် အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၉)၊ ဇူလိုင်လ(၁၆-၃၁)ရက...
ပည်သူ့ဝန်ထမ်းအများစုရဲ့ လုပ်ခလစာနှုန်းထားဟာ၊ အခြား ...
နွေစပါးစိုက်စနစ်(၄)မျိုး ယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက် အော...
Hydraulic Excavator Kobelco SK 75 SR-3 အား ကျွမ်းက...